पछिल्लाे अपडेट : चितवनमा रेनुकाे रफ्तार ह्वात्तै बढ्याे ! • raradiodarpan.com
पछिल्लाे अपडेट : चितवनमा रेनुकाे रफ्तार ह्वात्तै बढ्याे !
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना जारी छ । हालसम्म २१ हजार ८६० मतको गणना भइसकेको छ । अहिलेसम्मको मतगणनामा भरतपुरको मेयरमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेनु दाहालले अग्रता लिइरहेकी छन् ।
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार रेनुले हालसम्म ७४७१ मत पाएकी छन् । एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीले ७०९८ मतसहित उनलाई पछ्याइरहेका छन् । त्यस्तै मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले ३६०३ मत पाएका छन् ।
त्यस्तै उपमेयरमा गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेदवार चित्रसेन अधिकारीले ९०३२ मतसहित अग्रता लिइरहेका छन् । एमाले-राप्रपा गठबन्धनकी उम्मेदवार हिमला गुरुङले ५८६९ मतसहित उनलाई पछ्याइरहेकी छन् ।
भरतपुर महानगरपालिका- ५ को वडाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका युद्धप्रसाद श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । श्रेष्ठले २०७२ मत ल्याउँदै विजय हात पारेका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका पदमपाणी सुवेदीले १९५१ मत पाए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौंमा खाता खोलेको छ । काठमाडौं शंखरापुर नगरपालिकाको ३ वटा वडा सहित मेयरमा राप्रपाले जितेको हो । राप्रपाका मेयरका उम्मेदवार रमेश नापितले जित निकालेका हुन् ।
उनले निकटतम प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार एलपी श्रेष्ठ, एमालेका कृष्णलाल बजगाईं र माओवादी केन्द्रका मधु केसीलाई पराजित गरेका छन् । अन्तिम मत परिणाम घोषणा हुने क्रममा छ । राप्रपाले वडा नम्बर ३, ६ र ७ मा समेत जितेको छ । उपमेयरमा भने गठबन्धनबाट काँग्रेसकी समिता श्रेष्ठ निर्वाचित भएकी छिन् ।
काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णहरि महर्जन र सिर्जना बुर्लाकोटी निर्वाचित भएका छन् । महर्जनले ११ हजार ९८८ मत ल्याए भने नेकपा एमालेका रामेश्वर बोहराले ७ हजार ८०८ मत पाए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका लवकुमार बस्नेतले २ हजार ५२८ र राप्रपाका बसन्तकुमार बस्नेतले एक हजार एक मत पाएका छन् । उपमेयरमा बुर्लाकोटीले १० हजार ७८६ मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेकी भवानी डोटेल धितालले ८ हजार ६ मत पाइन् । २०७४ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट मेयर र उपमेयर जितेका रामेश्वर बोहरा र भवानी डोटेल धिताल विजयी भएका थिए ।